Kuzvipira 5 system:
Kuvhura uye nokutendeseka bhizinesi kuzvipira
1.Our kambani inoshinga kusimbisa kuvakwa kwema kiredhiti uye kuzvidzora, inonyatsoteerera nemutemo pamusoro pekuchengetedza kodzero yevatengi uye zvido zvavo, inoita nemwoyo wose zvisungo zvevashandi vebhizinesi, inoratidza pachena kuzvipira kwebhizinesi mukutenda kwakanaka, inovimbisa iyo mhando yezvinhu uye masevhisi, uye inomisa bhizinesi nemaitiro maitiro;
2.Kuti tivone kunaka kwemabhizimusi nhumbi, ruzha service system.Simudza zvinyorwa zvechigadzirwa uye nekudziridza ruzivo rwemagariro uye mukurumbira;
3.We tichanyatso shandisa masisitimu ekuziviswa kwemashoko uye mishumo yegore, uye Kuvandudza manejimendi echikwereti chakamira.
4.Tarira kutarira pakuvakwa kwetsika yakatendeka kuti isimbise ruzhinji uye kutungamira kwekuchengetedza kodzero yevatengi.
Kuiswa kweyemagariro ekuongorora uye maitiro ekuongorora
1.Kugadzira iyo yekudzoka yevatengi yekushanya system, iyo yedhipatimendi rebasa revatengi inoitisa ongororo yekudzoka kwevatengi, inounganidza mhinduro dzevatengi uye Zvikumbiro, uye inogadza mafaira ekugutsikana kwevatengi. Kana matambudziko akawanikwa, agadzirise munguva, uye ita kururamisa kwakakomba kune yakakodzera kutengesa uye vashandi vebasa;
2.Tinofanirwa kugamuchira nekutarisisa kutariswa kwenharaunda pamwe neruzhinji maonero, titeerere nemwoyo wose kumazano neMazano zveruzhinji, uye tishingaire kuita ongororo yemagariro uye ongororo mabasa.
Gadzira chigadzirwa uye sevhisi yemhando yepamusoro traceability system
1.Our kambani inotengesa chigadzirwa, INOSHESA yakagadziriswa uye yekutengesa software management system kubatanidza kugoverwa, iyo nhungamiro yekutarisa nhanho nedanho rinotarisa kudzivirira zvese zvinokanganisa mamiriro echigadzirwa mamiriro ezvinhu kuti zviitike;
2.Iyo kambani ine yakakwana mushure-yekutengesa sevhisi, yakamisa maitiro ese ekugadzirisa zvinetso zvechigadzirwa, uye yakadzidzisa mashandiro ekubata kutanga uye ozotora mutoro. Wongorora zvese kuti madhipatimendi ese ane chekuita nemhando yekudzora maitiro anofanirwa kufaira kubata mamiriro uye kuongororwa kwedambudziko muchimiro chakanyorwa, uye nekukamuranisa zvakajeka mabasa ekudzivirira kudzoka kumatambudziko akafanana.
Gadzira chirongwa chekuzvidavirira pakutenga
1.Our kambani inonyatsodzora mhando yeiyo yekutenga maitiro, uye inotaurira mhando yemhando uye zvemukati system zvinodiwa zvekambani kune vatengesi, uye inosarudza vanopa vanokwanisa kudzora mhando yezvigadzirwa kubva kunobva.
2.Supplier kuzvidavirira maitiro, kuiswa kweiyo yekugovera kwekutengesa yekuongororesa maitiro, yekuongorora fekitori, yekuedzwa kwekutsvaga, kuedza kwechigadzirwa kuramba zvigadzirwa.
1.Our kambani inogadzira iyo yekuzvitarisisa-yekuongorora mashandiro, dhipatimendi rega rega rinogadzira yaro yekutarisa system, inotakura pane yekuzvitarisisa uye yekuzvigadzirisa pachako kune dambudziko.
2.Iye mushure mekutengesa timu ichaumba uye inobata madhipatimendi akakodzera kuzvidavirira kune chero matambudziko anomuka.
Nguva yekutumira: Chivabvu-29-2020